मार्चमा ओसाका मौसम! तापमान, वर्षा, कपडा - Best of Japan
डोटनबोरी हिड्ने सडकमा पर्यटकहरू। ओसनका जापान = शटरस्टकमा डोटनबोरी प्रमुख पर्यटन स्थलहरू मध्ये एक हो
यदि तपाईं मार्चमा ओसाका जानुहुन्छ भने तपाईको सुटकेसमा कस्तो खालको कपडा प्याक गर्नु पर्छ? मार्चमा, ओसाका जाडोदेखि वसन्त transitionतुमा संक्रमणमा छन्। त्यहाँ न्यानो दिनको साथ समयहरू छन्, तर त्यहाँ धेरै चिसो दिनहरू पनि छन्, त्यसैले कृपया जाम्परहरू जस्तो जाडोको लुगा नभुल्नुहोस्। यस पृष्ठमा, म मार्चमा ओसाकाको मौसम वर्णन गर्छु।
ओसाका मासिक मौसमको बारेमा तल लेखहरू छन्। तपाइँले अधिक जानकारी चाहानुभएको महिनाको लागि स्लाइडरबाट चयन गर्नुहोस्।
तल मार्चमा टोकियो र होक्काइडोको मौसमका बारे लेखहरू छन्। यदि तपाईं होक्काइडोको साथसाथ ओसाका जाने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, कृपया नोट गर्नुहोस् कि होक्काइडोको मौसम ओसाका भन्दा केही फरक छ।
मार्चमा ओसाकामा मौसम (अवलोकन)
ओसाका मौसम मार्चको सुरूमै (२०१))
मार्चको बीचमा ओसाका मौसम (२०१ 2018)
मार्चको अन्तमा ओसाका मौसम (२०१))
ग्राफ: मार्चमा ओसाकामा तापमान परिवर्तन
ओसाकाको मौसम जापानको होन्शुको जस्तै टोकियो जस्ता समान छ। अन्य शहरहरूमा जस्तै मार्चमा मौसम थोरै अस्थिर छ। त्यहाँ सम्भावित कडा बतासको साथ तुलनात्मक रूपमा धेरै बादल र वर्षाका दिनहरू छन्।
मार्चको सुरूमा, त्यहाँ धेरै चिसो दिनहरू हुन्छन्। जे होस्, यो बिस्तारै मार्चको मध्यमा तातो हुनेछ। मार्चको अन्तमा, तातो वसन्त daysतु दिन बढ्नेछ।
यस समयदेखि जापानी मानिसहरु त्यो दिनको प्रतिक्षामा हुनेछ जब चेरी फूलहरू फूल्नेछन्।
यद्यपि ओसाकामा खिलिएका चेरी फूलहरू टोकियो भन्दा अलि ढिलो छन्। यसको कारण ओसाका जाडोमा टोकियो भन्दा थोरै चिसो छ।
ओसाकामा, चेरी फूलहरू सामान्यतया प्रत्येक वर्ष मार्च २th मा फूल्छन्। यो अप्रिलको सुरूदेखि नै चेरी फूलहरू खिलिरहेका छन्।
तल जापान मौसम संघ द्वारा घोषित ओसाकाको मौसम विज्ञान डाटा। तपाईको यात्राको लागि तयारी गर्दा कृपया यसलाई सन्दर्भित गर्नुहोस्।
न्यूनतम वायु तापमान 3.2
राम्रो मौसम अनुपात 47%
मार्च3२०१ 2019: ओसाका महल पार्क र पर्यटक, ओसाका, जापान = शटरस्टक
मार्चको सुरूमा, न्यूनतम तापक्रम फेब्रुअरीको तुलनामा बिहान र साँझमा अलि बढी हुन्छ। दिनको समयमा तातो समयहरू पनि छन्। त्यसोभए हिउँदमा कोट लगाएका व्यक्तिहरू शहरको वरिपरिको स .्ख्यामा बढ्नेछ।
मौसम अस्थिर र चिसो अधिक बारम्बार दिन संग हुन सक्छ।
मार्चको सुरूमा, ओसाकामा सूर्योदय समय करीव :6:२ is र सूर्यास्त समय लगभग १:23::17 हुन्छ।
राम्रो मौसम अनुपात 58%
मार्च १२, २०१:: ओसाकाको डोटनबरीमा हिंड्नेहरू। ओसनका जापान = शटरस्टकमा डोटनबुरी प्रमुख पर्यटन स्थलहरू मध्ये एक हो
मार्चको मध्य भागमा, तातो दिनहरू बढ्दै जानेछन् जस्तो कि वसन्त हो। तर उहि समयमा, चिसो दिन आउँदछ कि यो जाडोमा फर्की आएको छ।
यस समयमा जापानमा बस्ने मानिसहरूले समेत कस्तो किसिमको कपडा लगाउने होला भनेर सोच्न सक्छन्। जे भए पनि, कृपया जाम्पर जस्तो जाडोका लुगाहरू तयार गर्नुहोस्।
मार्चको मध्यमा, ओसाकामा सूर्योदय समय करीव 6:१० र सूर्यास्त समय १ 10:०18 को आसपास हुन्छ।
न्यूनतम वायु तापमान 3.8
राम्रो मौसम अनुपात 74%
मार्च २,, २०१:: ओसाकामा ओसाका महल, जापान = शटरस्टक
मार्चको अन्तसम्ममा, तातो दिनहरू अझ बढि जान्छन्। मौसम अझै अस्थिर छ र वर्षाका दिनहरू सामान्य छन्।
मार्चको अन्त्यमा, चेरी फूलहरू अन्ततः फूल्न थाल्छन्। चेरी फूलहरूमा हेर्दा, मानिसहरूले महसुस गरे कि वसन्त hasतु आएको छ।
यस समयमा, यो अझै बिहानी र साँझ चिसो छ, त्यसैले कृपया जाम्पर जस्तो जाडोको लुगा लगाउन जारी राख्नुहोस्।
मार्चको अन्तमा, ओसाकामा सूर्योदय समय करीव :5::56 छ र सूर्यास्त समय १ 18:१:13 हो।
ओसाकाका लागि, कृपया निम्न लेखहरूमा सन्दर्भ गर्नुहोस् यदि तपाईंलाई मनपर्दछ भने।